Dib u soo Noqoshada Rajada Xaafada Phillips Neighborhood of Minneapolis
Bulshada Hope waxay raadineysaa inay noqoto xayiraad isbedel, korniinka iyo nabadgelyada aagga Minneapolis Phillips.In la ilaaliyo hawlgalkan, Rajada waxay kor u qaadaysaa habka xaafad joogta ah iyada oo loo marayo ururada bulshada, waxbarashada firfircoon, hoggaaminta, iyo horumarinta guryaha la awoodi karo. Hope wuxuu u shaqeeyaa boqolaal qof sannad walba dadaal ku habboon dib-u-kicinta xaafadda. Istaraatiijiyadu waxay ku dhalatay daruuri. Badhtamihii 1990aadkii Hope wuxuu ahaa urur yar oo ka shaqeynaya isbedelka qayb ka mid ah Phillips Neighborhood oo ku yaalla Minneapolis kaas oo ay burburiyeen mukhaadaraad sharci darro ah, rabshado naxdin leh, iyo lacag la'aan. Ururku wuxuu dib u bilawday guryo yar oo bilaabay barnaamij yar oo caruurta ah.
Xarunta McKnight Foundation waxay taageertaa Hope Community ee shaqada Minneapolis Phillips Community tan iyo 1991. Waqtigaan, Barnaamijka Gobolka & Bulshooyinka McKnight wuxuu bixiyaa adeeg guud Taageerada Hope Community sababtoo ah si ay u go'aamiyaan xaafadaha dhaqaale ee firfircoon. Hope wuxuu abuuray aragti bulsho ah si uu u qaato hawlgale cusub isaga oo ka jawaabaya sanadihii xaafadaha burburay. Waxay wax ka qabteen dhismooyinka, bilaabay yar yar, kadibna waxay isticmaalaan qalab dhaqaale oo cusub iyo iskaashi muddo dheer ah si ay u koraan. Hadda 173 guri oo kiro ah iyo meelo kale oo beesha ah ayaa badalaya wajiga xaafadda.
Hope Community waxay raadineysaa inay noqoto xayiraad isbedel, korniinka, iyo amniga aagga Minneapolis Phillips.
Dhismayaasha keligood isma bedeli karaan xaafadda. Rajeyntu waxay leedahay taariikh dheer oo xidhiidh bulsho. Iminka in ka badan 1,000 dhallinyaro kala duwan iyo dad waaweyn ayaa sanad walba la xirriira rajada si loo dhiso xirfadaha, bulshada, hantida, iyo hoggaaminta. Waxaan horumarinnaa hoggaamiyeyaasha bulshada ee kor u qaadaya oo ka caawiya inay wax dhacaan, baraan geedi socodka oo ay sii socdaan - khayraad qiimo leh oo loogu talagalay isbedel bulsho oo muddo dheer socota.
Hope waa shabakado badan oo saameyn ku leh taasoo keeneysa saameyn badan. In ka badan 40 wada-hawlgalayaashu way ku lug leeyihiin, iyo shaqaalaha Hope iyo hoggaamiyeyaasha Horumarinta isbeddelka bulshada ee la xidhiidha gaadiidka, helitaanka cuntada iyo sinaanta dhaqaalaha ee la xiriira beeraha magaalada. Mashruuca McKnight Foundation ee Hope ee hawlgalka gaarka ah ayaa sameeyey saameyn weyn, oo muhiim u ah mustaqbal magaalada iyo gobolka - si buuxda uga shaqeeya dadka dakhligoodu yar yahay iyo kuwa dhexdhexaadka ah noloshooda iyo dhisidda mustaqbalka beelahooda.